कहाँबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दै छन् शीर्ष नेता ? – Etajakhabar
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन मंसिरका लागि तय भएपछि दलका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् भन्नेबारे चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष सुनसरी–४ बाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २७, २०७४ समय: ८:२१:१८
डा देवकोटालाई श्रद्धाञ्जलि दिन गएका यि चर्चित अनुहारहरुले भावुक हुँदै भने उनको अभावलाई परिपूर्ति गर्न देशलाई वर्षौँ लाग्छ
प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो विदेश भ्रमणका लागी निस्किए, के के गर्लान् त उनले यस पटकको चीन भ्रमणमा ?
बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा छायो सन्नाटा, सन्नाटाकाबिच डा उपेन्द्र देवकोटालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनेको भिड
डा. देवकोटाको निधनको रात न्युरो अस्पतालको आँगनको दृश्य (भिडियो)